Oku vidiyo dị ugbu a na WhatsApp beta | Gam akporosis
Oku vidiyo a dị ugbu a na WhatsApp, ọ bụ ezie naanị ụfọdụ ndị ọrụ
una nke atụmatụ ndị a kacha atụ anya video oku ndidi na WhatsApp ruo oge ụfọdụ ugbu a. A mara na ndị otu WhatsApp nọ na-arụ ọrụ a ruo oge ụfọdụ ma sonyere oku dị ka ihe ọzọ n'ime atụmatụ ndị ahụ n'oge na-adịghị anya ga-erute ngwa izi ozi kachasị eji n'oge ahụ na ụwa dum.
Taa ọ na-apụta maka ụfọdụ ndị ọrụ nhọrọ ịkpọ oku vidiyo. Nnukwu mgbanwe maka ngwa ngwa ozi a bụ nke ga-asọ mpi megide ụmụ nwanyị nke ụdị a dịka Skype ma ọ bụ Hangouts. Ihe na-atọ ọchị banyere mbugharị a, nke kwesịrị ịbụ mpaghara, bụ na enwere ike ịrụ ọrụ ha n'ụzọ anyị ga-eso gị kerịta n'okpuru.
Ọ bụrụ na ị na-na nke ọ bụla n'ime WhatsApp beta ụdịSite na mmemme ahụ na Playlọ Ahịa Google, ị gaghị emelite ihe ọ bụla, ebe ọ ga-apụta dị ka ihe efu. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-akpọ oku vidiyo na onye natara ya enweghị ọrụ, na-enwe ụdị ochie nke ngwa ahụ, naanị ihe ị nwere ike ime bụ ịkpọ oku.
Onwe m, mgbe emesịrị WhatsApp si Playlọ Ahịa Google Play (m nọ na ọwa beta), enwere m ya na ịpị akara ngosi oku na windo mkparịta ụka. Nchịkọta nhọrọ malitere na nke ị nwere ike ịhụ nhọrọ nke oku ọdịyo ma ọ bụ oku vidiyo.
Pịa oku vidiyo ma banye ozugbo na ọrụ a nke ga-emepe ụwa ọhụrụ nke nhọrọ ịkpọtụrụ ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ. Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ụdị beta kachasị ọhụrụ nke WhatsApp, enwere ụfọdụ ndị ọrụ rụzuru na-arụ ọrụ mgbe ị na-ehichapụ data wee bido WhatsApp ọzọ. N’ezie, cheta na ị ghaghị idetu mkparịta ụka ndị i nwere ka ị ghara ida ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Oku vidiyo a dị ugbu a na WhatsApp, ọ bụ ezie naanị ụfọdụ ndị ọrụ
A na-emelite Ọrụ Google Play na ezigbo ibu nke atụmatụ na ndozi ọhụrụ